Ranjan Adhikari Chhetri – Page 20 – BIG FM 101.2 MHz
Home » Ranjan Adhikari Chhetri (page 20)
नोभा दही ‘बिग तीज, बिग धमाका’ जारी, दोस्रो दिन माया, स्वस्तिका, लक्ष्मी र रोशनी विजयी
बिग न्युज, पोखरा । नेपाली महिलाहरुको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसर पारेर प्रदेशकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो विग एफएमले सञ्चालन गरेको रेडियो गेम शो ‘बिग तीज बिग धमाका’ जारी रहेको छ । फिस्टेल डेरी प्रालिको उत्पादन नोभा दहीसँगको सहकार्यमा सञ्चालित गेम शोको दोस्रो दिन पनि नियमानुसार चार जना विजेता बनेका छन् । उनीहरुले जनही एक हजार जिते । सही उत्तर दिएर एमएमएस …
लभ्लीडाँडामा एउटै हाँगामा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिए पोखराकी नेपाली र स्याङ्जाका भण्डारी
पोखरा । दुई साता अघि घरबाट हराएको भन्दै कास्की प्रहरीमा निवेदन परेको थियो । तर, सोमबार लभ जोडीहरुको डेटिङ स्पट भनेर चिनिने लभ्लीहिल नजिकै रुखमा मृत अवस्थामा उनीहरु भेटिए । एउटै डोरी पासो लगाएर झुण्डिएको अवस्थामा । उनीहरु बाँझापाटनकी शशी नेपाली र स्याङजा पुतलीबजार–९ का मनबहादुर भण्डारी रहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरु ११ गतेदेखि परिवारको सम्पर्कबाट टाढा रहेका थिए …
पोउवा संघ चुनावः प्रजु प्यानलको उम्मेद्वारी दर्ता
पोखरा । पोखरा उद्योग बाणिज्य संघको ३२ औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वका लागि काँग्रेस निकट प्यानलले मनोनयन दर्ता गराएको छ । अध्यक्षका उम्मेदवार रवीन्द्रबहादुर प्रजु सहितको प्यानलले उद्योग बाणिज्य संघमा पुगेर मनोनयन दर्ता गराएको हो । मनोनयन अघि चिप्लेढुंगाबाट ¥यालि सहित निस्किएको टोलि महेन्द्रपुल पालिखेचोक हुँदै उद्योग बाणिज्य संघको कार्यालयमा पुगेको थियो । प्रजु प्यानलबाट बरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण कोइराला, उद्योग उपाध्यक्षमा विन्दु …
तनहुँमा बस पल्टिँदा सहचालक तामाङको मृत्यु, कास्की र तनहुँमा दुई जना मृत फेला
पोखरा । तनहुँको भानु नगरपालीका – ३ तुरतुरेमा बस पल्टिँदा सहचालकको ज्यान गएको छ । डुम्रेबाट बेशीशहरतर्फ गईरहेको ग१ख ४४४५ नं.को बस आफै अनियन्त्रित भई सडकको बाँया साईडमा पल्टिएको थियो । सहचालक भानु नगरपालिका १ सालबिस्ने बस्ने २७ वर्षीय ज्ञान ब. तामाङ घाईते भई उपचारको लागी लक्ष्मी अस्पताल डुम्रे पठाईएकोमा उपचारको उनको मृत्यू भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । घटनास्थलमा …
पोउवा संघ चुनावः अध्यक्षका प्रत्यासी दामु अधिकारीसहितको प्यानलद्वारा उम्मेद्वारी दर्ता
पोखरा, २५ भदौ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३२ औं महासधिवेशनमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेको ‘समावेशी-व्यवसायी समूह’ले सोमबार उम्मेद्वारी दर्ता गरेका छन् । समूहको नेतृत्व गरेका अध्यक्षका प्रत्यासी दामु अधिकारीसहित सातै जना पदाधिकारी र सदस्यका उम्मेद्वारहरुले सोमबार उम्मेद्वारी दर्ता गरेका हुन् । अधिकारीले सबैभन्दा पहिले उम्मेद्वारी दर्ता गरेका हुन् । अधिकारीको प्रस्तावकमा ५ जना र समर्थकमा १० जना रहेका छन् । …
जब उनी मजदुरी गर्छु भन्दै जान्थे, भारी बोक्न सक्दैन भनेर फर्काइदिन्थे । स्कुलको बसमा काम गर्छु भन्दै पुग्थे, सानो मान्छे राख्न मिल्दैन भनिदिन्थे । सेक्युरिटी गार्ड बस्छु भनेर पुग्थे, गेटमै निदाउँछस् हुँदैन भनिदिन्थे । किसान सुनारलाई आपत प¥यो, अब के गर्ने त ? काम खोज्दाखोज्दै उनी हैरान भए । तर, हार मानेनन् । पत्रिकामा कर्मचारी आवश्यकता लेखिएको वर्गीकृत डिस्प्लेको कटिङ …
नोभा दही ‘बिग तीज, बिग धमाका’ सुरु, पहिलो दिन जुना, लक्ष्मी, सुप्रिया र धनुश विजयी
बिग न्युज, पोखरा । नेपाली महिलाहरुको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसर पारेर प्रदेशकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो विग एफएमले रेडियो गेम शो ‘बिग तीज बिग धमाका’ सञ्चालन गरेको छ । फिस्टेल डेरी प्रालिको उत्पादन नोभा दहीसँगको सहकार्यमा सञ्चालित गेम शोको पहिलो दिन नियमानुसार चार जना विजेता बनेका छन् । उनीहरु १÷१ जितेका छन् । सही उत्तर दिएर एमएमएस गर्ने मध्येबाट सुप्रिया ढकाल …
पोखरा । बेगनासतालमा शनिबार गैंडाकोटबाट परिवारसहित ससुराली आएका रवी खनालले चलाएको डुंगा दुर्घटना भयो । त्यस डुंगामा १० जना सवारमध्ये उनकी श्रीमती सपना र निशा पौडेल मात्र बाँचे । अरु ८ जनाको ज्यान बचेन । नवलपरासी गैंडाकोटकी सपना खनाल, श्रीमान रवि र छोराहरु शिव, शंकरका साथ पोखरा आईन् । नेपाल आर्मीमा जागिरे रवीको भर्खैरै बढुवा भएको थियो । बढुवा भएको …
रेजिनाको बिलौना, मामाघर गएका आमा र भाइ बेगनास तालमै गुमाईन
पोखरा । तनहुँ भिमाद ५ की रेजिना गैरे यतिखेर भाव विह्वल छिन् । उनले अप्रत्यासित घटनामा आमा जमुना गैरे र ५ वर्षीय भाइ रञ्जितलाई गुमाएकी छन् । आमा जमुनाको शव पोष्टमार्टमका लागि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा राखिएको छ भने तालमाडुबेकाभाइको पूर्वान्ह ११ बजेतिर मात्रै शव भेटियो । अस्पतलामा रुवावासी गरिरहेको अवस्थामा भेटिएकी रेजिना घरकी जेठी छोरी हुन् । उनकी अर्की बहिनी …
Page 20 of 763« First...10«1819202122 » 304050...Last »